KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Mozambican Sign Language Myanmar Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Mordekai dii awerɛhow (1-5)
Mordekai ka kyerɛɛ Ester sɛ ɔnkɔsrɛ mma wɔn (6-17)
4 Bere a Mordekai+ tee nea asi nyinaa no,+ osuan n’ataade mu, na ofuraa awerɛhow ntama* de nsõ guu ne ho. Afei opue kogyinaa kurow no mfinimfini, na osui paa; osui yayaayaw. 2 Ɔkɔe koduu ɔhene no pon ano, nanso wantra, efisɛ na ɛnsɛ sɛ obiara de awerɛhow ntama wura ɔhene pon no mu. 3 Na ɔmantam biara+ a wɔtee ɔhene asɛm ne ne mmara no wɔ hɔ no, Yudafo a ɛwɔ hɔ no dii awerɛhow paa, wɔyɛɛ akɔnkyen,*+ na wosu teɛteɛɛm. Wɔn mu pii dedaa awerɛhow ntama* so ne nsõ mu.+ 4 Bere a Ester mmaawa ne n’asomfo* no bɛka kyerɛɛ no no, asɛm no haw ɔhemmaa paa. Ɛnna ɔsoma ma wɔde ntaade kɔmaa Mordekai sɛ ɔnhyɛ na onyi awerɛhow ntama* no, nanso wannye. 5 Ɛnna Ester frɛɛ Hatak, ɔhene asomfo* no baako a ɔhene ayi no sɛ ɔnsom no no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ onkobisa Mordekai nea enti a ɔreyɛ saa ne nea asi. 6 Enti Hatak kɔɔ Mordekai nkyɛn wɔ kurow no abɔnten so wɔ ɔhene pon no anim. 7 Na Mordekai kaa nea ato no nyinaa kyerɛɛ no, na sika dodow+ a Haman ahyɛ bɔ sɛ obetua agu ɔhene foto mu sɛ wɔmfa nsɛe Yudafo no nso, ɔka kyerɛɛ no.+ 8 Afei nso, mmara a wɔkyerɛwee wɔ krataa so a wɔhyɛe wɔ Susan*+ sɛ wɔnhyew wɔn ase no, ɔde bi maa no. Ɔkae sɛ ɔmfa nkyerɛ Ester, na ɔnkyerɛkyerɛ mu nkyerɛ no, na ɔnka nkyerɛ no sɛ+ ɔnkɔ ɔhene anim nkɔsrɛ no sɛ onhu wɔn mmɔbɔ, na ɔmpa kyɛw mma ne manfo. 9 Afei Hatak san bae, na ɔbɛkaa nea Mordekai kae no kyerɛɛ Ester. 10 Ɛnna Ester somaa Hatak sɛ ɔnkɔka nkyerɛ Mordekai+ sɛ: 11 “Ɔhene nkoa ne nnipa a ɛwɔ ɔhene no amantam mu nim sɛ, sɛ ɔhene mfrɛɛ wo na wokɔ n’anim wɔ ahemfi hɔ+ a, ɔbarima oo, ɔbea oo, mmara baako pɛ na ɛwɔ hɔ: Wobekum wo; sɛ wubenya wo ti adidi mu a, gye sɛ ɔhene de ne sika kɔkɔɔ poma kyerɛ wo so ansa.+ Nanso nnafua 30 ni, ɔhene mfrɛɛ me sɛ memmra ne nkyɛn.” 12 Bere a wɔkɔkaa Ester asɛm no kyerɛɛ Mordekai no, 13 ɔde mmuae kɔmaa Ester sɛ: “Mma w’adwene nnyɛ wo sɛ wote ahemfi nti nea ɛbɛba Yudafo a aka nyinaa so no, ebi rentumi nka wo. 14 Sɛ woanka ho hwee saa bere yi a, Yudafo benya ogye ne mmoa afi baabi foforo,+ na wo ne wo papa fifo de, mubewuwu. Na hena na onim, ebia eyi* nti na woabɛyɛ ɔdehye yi.”+ 15 Ɛnna Ester soma kɔka kyerɛɛ Mordekai sɛ: 16 “Kɔ na kɔboaboa Yudafo a wɔwɔ Susan* nyinaa ano, na monyɛ akɔnkyen+ mma me. Munnnidi na monnnom nnansa,+ awia ne anadwo. Me nso me ne me mmaawa bɛyɛ akɔnkyen. Mmara mma kwan sɛ mekɔ ɔhene anim, nanso mɛkɔ; miwu a, na mawu.” 17 Enti Mordekai siim kɔe, na ɔkɔyɛɛ nea Ester kae sɛ ɔnyɛ nyinaa.
^ Anaa “n’asomfo a wɔasa wɔn.”
^ Anaa “asomfo a wɔasa wɔn.”
^ Anaa “Susa.”
^ Anaa “amanehunu bere sɛɛ.”